ရော်နယ်ဒိုကြောင့် ဘဝမှာ အရှက်ရဆုံး အခိုက်အတန့် ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ဂျာမန်လက်ရွေးစင် – Sports Soccer News
ရော်နယ်ဒိုကြောင့် ဘဝမှာ အရှက်ရဆုံး အခိုက်အတန့် ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ဂျာမန်လက်ရွေးစင်
လက်ရှိအချိန်မှာ အင်တာမီလန် အသင်းဆီ အငှားနဲ့ လာရောက် ကစားနေတဲ့ ဂျာမနီ လက်ရွေးစင် ကစားသမား ဂိုဆန်ကတော့ သူ့ဘဝရဲ့ အရှက်ရွံ့ဆုံး ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ အခိုက်အတန့်ဟာ ခရစ္စတီယာနို ရော်နယ်ဒို ဆီက ပွဲအပြီးမှာ ဂျာစီ တောင်းခဲ့မိတဲ့ အခိုက်အတန့် ပါပဲလို့ ဝန်ခံပြောဆိုမှု ပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်။
ရော်ဘင် ဂိုဆန် ဆိုတာဟာ အတ္တလန္တာ အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ် ခံစစ် ၊ ဘယ် ခံစစ် နေရာတွေမှာ ကစားပေးလေ့ရှိတတ်တဲ့ ကစားသမား တစ်ဦး ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ အချိန်မှာတော့ ပြိုင်ဖက် အင်တာ မီလန် အသင်းဆီ အငှား သွားရောက်် ကစားနေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ စီးရီးအေ ပြိုင်ပွဲမှာပဲ ကစားသူ ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဂျူဗင်တပ် တိုက်စစ်မှူး ဖြစ်ခဲ့သူ ရော်နယ်ဒိုနဲ့ ကွင်းထဲမှာ ပြိုင်ဖက်အဖြစ် ရင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးသူ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ ရော်နယ်ဒို ဆီက ဂျာစီ ရယူဖို့ တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ ရက်စွဲဟာ ရှက်စရာ အကောင်းဆုံးနေ့ ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ဂိုဆန်က ပြောခဲ့လိုက်ပါတယ်။
” ပွဲသိမ်း ခရာ မှုတ်ပြီးချိန်မှာပဲ ကျွန်တော် သူ့ဆီ သွားခဲ့ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ ရော်နယ်ဒို က လက်သင့် မခံခဲ့ပါဘူး ။ ကျွန်တော်က ‘ ခရစ္စတီယာနို ရေ ၊ ငါ မင်းရဲ့ ဂျာစီ ရနိုင်မလား ? ‘ လို့ မေးခဲ့ချိန်မှာ သူဟာ အနောက်ကိုတောင် လှည့်မကြည့်ပဲ ‘ No ‘ ဆိုပြီး ပြန်ဖြေသွားခဲ့ပါတယ် ”
” ကျွန်တော် လုံးဝ ရှက်ရွံ့ သွားခဲ့ရပါတယ် ။ ကျွန်တော် အဝေးကို ထွက်သွားပြီး သိမ်ငယ်စိတ်တွေ ဝင်နေခဲ့ရပါတယ်။ ခင်ဗျား တစ်ယောက်ထဲ ရှက်ရွံ့ သိမ်ငယ်နေချိန်မှာ တစ်စုံတစ်ယောက်များ ဒါကို မြင်သွားမလားဆိုတဲ့ စိတ််မျိုး ခင်ဗျားတို့ ဖြစ်ဖူးမှာပါ ”
” ကျွန်တော်လည်း အဲ့လိုကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် အဲ့တာကို ဖုံးကွယ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ် ” လို့ ဂိုဆန် က အတ္တလန္တာ အသင်းမှာ ကစားခဲ့စဥ်က ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ သူ့ရဲ့ ရှက်စရာ အဖြစ်အပျက်ကို ထုတ်ပြော သွားခဲ့လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဂိုဆန်ဟာ သူလိုချင်တဲ့ ပုံစံနဲ့ ကွင်းထဲမှာ ရော်နယ်ဒို နဲ့ ဂျာစီ မလဲလှယ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ နောက်ဆုံးမှာတော့ ပေါ်တူဂီသားဆီက ဂျာစီ ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်က သူဟာ ဘယ်လောက်အထိ ပျော်ရွှင်ခဲ့သလဲဆိုတာကို အဝတ်လဲခန်းထဲ မြင်တွေ့ခဲ့ရ ပါသေးတယ်။
အဲ့ဒီနောက် ဂျာမဏီ တို့ ပေါ်တူဂီ ကို4–2ဆိုတဲ့ ရလဒ်နဲ့ အနိုင် ကစားနိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ယူရို 2020 ပွဲစဥ်မှာ ဂိုဆန်ကိုယ်တိုင် ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး ပွဲစဥ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆု ကိုပါ ရယူရင်း ရော်နယ်ဒို ကို ပြန်လည် လက်စားချေ သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အင္တာမီလန္ အသင္းဆီ အငွားနဲ႕ လာေရာက္ ကစားေနတဲ့ ဂ်ာမနီ လက္ေ႐ြးစင္ ကစားသမား ဂိုဆန္ကေတာ့ သူ႕ဘဝရဲ႕ အရွက္႐ြံ႕ဆုံး ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ အခိုက္အတန႔္ဟာ ခရစၥတီယာနို ေရာ္နယ္ဒို ဆီက ပြဲအၿပီးမွာ ဂ်ာစီ ေတာင္းခဲ့မိတဲ့ အခိုက္အတန႔္ ပါပဲလို႔ ဝန္ခံေျပာဆိုမႈ ျပဳလုပ္သြား ခဲ့ပါတယ္။
ေရာ္ဘင္ ဂိုဆန္ ဆိုတာဟာ အတၱလႏၲာ အသင္းရဲ႕ ကြင္းလယ္ ခံစစ္ ၊ ဘယ္ ခံစစ္ ေနရာေတြမွာ ကစားေပးေလ့ရွိတတ္တဲ့ ကစားသမား တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ အခ်ိန္မွာေတာ့ ၿပိဳင္ဖက္ အင္တာ မီလန္ အသင္းဆီ အငွား သြားေရာက္္ ကစားေနသူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သူဟာ စီးရီးေအ ၿပိဳင္ပြဲမွာပဲ ကစားသူ ျဖစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ဂ်ဴဗင္တပ္ တိုက္စစ္မႉး ျဖစ္ခဲ့သူ ေရာ္နယ္ဒိုနဲ႕ ကြင္းထဲမွာ ၿပိဳင္ဖက္အျဖစ္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာ့ ေရာ္နယ္ဒို ဆီက ဂ်ာစီ ရယူဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ ရက္စြဲဟာ ရွက္စရာ အေကာင္းဆုံးေန႕ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ဂိုဆန္က ေျပာခဲ့လိုက္ပါတယ္။
” ပြဲသိမ္း ခရာ မႈတ္ၿပီးခ်ိန္မွာပဲ ကြၽန္ေတာ္ သူ႕ဆီ သြားခဲ့ပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ ေရာ္နယ္ဒို က လက္သင့္ မခံခဲ့ပါဘူး ။ ကြၽန္ေတာ္က ‘ ခရစၥတီယာနို ေရ ၊ ငါ မင္းရဲ႕ ဂ်ာစီ ရနိုင္မလား ? ‘ လို႔ ေမးခဲ့ခ်ိန္မွာ သူဟာ အေနာက္ကိုေတာင္ လွည့္မၾကည့္ပဲ ‘ No ‘ ဆိုၿပီး ျပန္ေျဖသြားခဲ့ပါတယ္ ”
” ကြၽန္ေတာ္ လုံးဝ ရွက္႐ြံ႕ သြားခဲ့ရပါတယ္ ။ ကြၽန္ေတာ္ အေဝးကို ထြက္သြားၿပီး သိမ္ငယ္စိတ္ေတြ ဝင္ေနခဲ့ရပါတယ္။ ခင္ဗ်ား တစ္ေယာက္ထဲ ရွက္႐ြံ႕ သိမ္ငယ္ေနခ်ိန္မွာ တစ္စုံတစ္ေယာက္မ်ား ဒါကို ျမင္သြားမလားဆိုတဲ့ စိတ္္မ်ိဳး ခင္ဗ်ားတို႔ ျဖစ္ဖူးမွာပါ ”
” ကြၽန္ေတာ္လည္း အဲ့လိုႀကီးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ အဲ့တာကို ဖုံးကြယ္နိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္ ” လို႔ ဂိုဆန္ က အတၱလႏၲာ အသင္းမွာ ကစားခဲ့စဥ္က ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရတဲ့ သူ႕ရဲ႕ ရွက္စရာ အျဖစ္အပ်က္ကို ထုတ္ေျပာ သြားခဲ့လိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ဂိုဆန္ဟာ သူလိုခ်င္တဲ့ ပုံစံနဲ႕ ကြင္းထဲမွာ ေရာ္နယ္ဒို နဲ႕ ဂ်ာစီ မလဲလွယ္နိုင္ခဲ့ေပမဲ့ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ေပၚတူဂီသားဆီက ဂ်ာစီ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္က သူဟာ ဘယ္ေလာက္အထိ ေပ်ာ္႐ႊင္ခဲ့သလဲဆိုတာကို အဝတ္လဲခန္းထဲ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရ ပါေသးတယ္။
အဲ့ဒီေနာက္ ဂ်ာမဏီ တို႔ ေပၚတူဂီ ကို4–2ဆိုတဲ့ ရလဒ္နဲ႕ အနိုင္ ကစားနိုင္ခဲ့ၾကတဲ့ ယူရို 2020 ပြဲစဥ္မွာ ဂိုဆန္ကိုယ္တိုင္ ဂိုးသြင္းယူနိုင္ခဲ့ၿပီး ပြဲစဥ္ရဲ႕ အေကာင္းဆုံး ကစားသမားဆု ကိုပါ ရယူရင္း ေရာ္နယ္ဒို ကို ျပန္လည္ လက္စားေခ်သြားနိုင္ခဲ့ပါတယ္။